Travel to Mrauk Oo | Myanmar Travel Guide
by Kyaw Swar Han on Nov 29, 2016
အခုလိုအေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်း၊ကုလားတန်မြစ်နဲ့ လေးမြို့မြစ်ကြားမှာ တည်ရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေစုဝေးရာ မြောက်ဦးမြို့လေးဆီကို Best Trip Website/facebook ကနေအလည်ခေါ် သွားပါရစေ. . .
ရန်ကုန်ကနေ ကားနဲ့လည်းသွားနိုင်သလို လေယာဉ်နဲ့လဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကားကတော့ ရန်ကုန်အဝေးပြေးဂိတ်ကနေညဘက် ၈ နာရီထွက်ရင် နောက်နေ့နံနက် ၆ နာရီလောက် မြောက်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်။ ကားတွေကတော့ တိုးရတနာ၊ ကြံတိုင်းအောင်၊ ကစ္စပ၊ ရွှေပြည်သစ်၊ ရိုးမရာဇာ၊ အောင်ပြည့်စုံ စတဲ့ expressကားတွေဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ ရိုးရိုး-15500 ကျပ် ၊အထူး 20500 ကျပ် ပါ။
လေယာဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တွေထိလေယာဉ်စီးရမှာဖြစ်ပြီး စစ်တွေကမှတဆင့်မြောက်ဦးကို ကား(သို့)သင်္ဘော ကြိုက်နှစ်သက်ရာစီးပြီး သွားလို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ စစ်တွေထိလေယာဉ်စီးရင်တော့ ၁နာရီနဲ့ ၁၅မိနစ်ပဲကြာပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းများကတော့ FMI, Golden Myanmar, Myanmar National, Man Yadanarbon, Air KBZ, MAI, Air Mandalay စသည်ဖြင့် ကြိုက်ရာရွေးနိုင်ပါတယ်။
စစ်တွေကမှ မြောက်ဦးကိုကားသွားနဲ့ရင်တော့ ၃နာရီလောက်ကြာမြင့်ပါတယ်။ အချိန်ရတဲ့သူတွေကတော့ စက်လှေ(သို့ ) သင်္ဘောများနဲ့ စစ်တွေကနေ မြောက်ဦးကိုသွားကြပါတယ်။ စစ်တွေကနေမြောက်ဦးထိ ကားအဌားစျေးနှုန်း တွေကတော့ အသွား 70000၊ အပြန် 70000၊ အသွားအပြန် စျေး 140000 ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ မြောက်ဦးမှာလည်ပတ်မယ်ဆိုလျှင်တော့ High-jet ဆိုရင် 25000၊ 30000ရှိပြီးAirconditioned Van ဆိုရင် 50000ရှိပါတယ်။ တုတ်တုတ်နဲ့ လည်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားအစုံကို 20000 ပဲရှိပါတယ်။
စစ်တွေကနေ မြောက်ဦးကိုကားနဲ့လာရင် ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ကျောက်တော်မြို့တို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှ မြောက်ဦးမြို့လေးကိုရောက်ရှိမှာပါ။ ပထမဆုံး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့လေးကိုဖြတ်သန်းရပုံလေးက မန္တလေးမှမင်းကွန်းအလာ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းစပ်လေးက ဖြတ်သန်းရပုံလေးနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ လမ်းတလျောက် ဝင်းဝါလှပတဲ့စပါးခင်းတွေ၊စိမ်းစိုလှပတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေကို မျက်စိပသာဒဖြစ်ဖွယ် ရှုလို့မဆုံးမြင်တွေရမှာပါ။ ကျောက်တော်ရောက်ရင်တော့ လွမ်းမောဖွယ် သာယာလှပလွန်းတဲ့ ကစ္ဆနဒီမြစ်နဲ့ ကစ္ဆပနဒီတံတား၊အနီးနားက မြတ်စွာဘုရှားရှင်ကြွရောက်တော်မူခဲ့သော ကျောက်တော်တောင်ဘုရားကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖူး မျှော်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ရင်ငွေ့လှုံပေးတော်မူခဲ့သော မုနိလေးဆူမှာတစ်ဆူအပါအဝင် ကျောက်တော်မဟာမြတ်မုနိကို ဝင်ဖူးမယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကျောက်တော်မြို့ကနေ ၁ နာရီလောက် ခရီးဆက်ရင်တော့ မြောက်ဦးမြို့လေးကို ရောက်ပါပြီ။
မြောက်ဦးမှာတည်းခိုဖို့ Hotel တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ မြောက်ဦးHotel ၊ ရွှေသဇင် Hotel၊ Mrauk Oo Nawarat Hotel၊ Mrauk U Princess Resort၊ Prince Hotel၊ Royal City Hotel စသည်ဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ စျေးနှုန်းအလိုက် ရွေးချယ်တည်းခိုလို့ရပါတယ်။
Maruk Oo Nawarat Hotel
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တည်းခဲ့တဲ့ Maruk Oo Nawarat Hotelလေးကိုပဲ Recommend ပေးချင်ပါတယ်။ နေရာက ညောင်ပင်စျေးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေလမ်းမပေါ်တွင်ပဲ တည်ရှိုပါတယ်။ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကတော့ ဘန်ဂလိုပုံစံလေးပါ။ အခန်းအမျိုးအစား တွေကတော့ Superior Roomဆိုလျှင် 45000၊ Deluxe Room ဆိုလျှင် 55000၊ Family Room ဆိုလျှင် 75000၊ Extra Bed ထိုးရင် 20000ပါ။
အခန်းတိုင်းမှာ Wifi free ရပါတယ်။ Bathroomမှာလည်း ရေပူ၊ရေအေးနှစ်မျိုးလုံး ပါရှိပါတယ်။ နံနက်စာကတော့ ဘူဖေးစနစ်ပါ။ lunch နဲ့ dinner တွေကိုလည်း မှာယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ စျေးလေးလဲသင့်ပါတယ်။ Hotelတည်နေရာကလည်း သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးရဲ့အနီးနားလေးမှာပဲမို့ လမ်းလျှောက်ရင်တောင် ၅ မိနစ်နဲ့ ပုထိုးတော်ကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ Hotelမှာ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်ကအစ အကုန်ဌားလို့ရပါတယ်။ ကားဌားချင်တယ်ဆိုရင်လဲ Hotelက စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတာပေါ့။
တစ်ခုသဘောကျတာကတော့ Sunrise၊ Sunsetကြည့်ဖို့မြဝါတောင်နဲ့ ဟရီတောင်နှစ်တောင်က Hotelနားတင်ဆိုတော့ လမ်းလေးလျှောက်ပြီး တက်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ စားသောက်ဆိုင်တွေကလည်း Hotelနားမှာအဆင်သင့်။
မြောက်ဦးကားဆရာ - 09421710061
တုတ်တုတ်ဆရာ - 09251135509
မြောက်ဦးမှာက ရှေးဘုရင်မင်းအဆက်ဆက် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ စေတီပုထိုး တော်တော်များရှိပါတယ်။ တချို့ဘုရားတွေက တစ်စုတဝေးထဲရှိကြသလို တချို့လည်း တောင်ကုန်း၊တောင်တန်း၊ကုန်းမြင့်လေးတွေပေါ်မှာ တည်ရှိကြပါတယ်။ ဖူးမျှော်ရမယ့်ဘုရားတွေနဲ့အခြားလည်ပတ်စရာတွေကတော့
• ရန်အောင်ဇေယျ(ခေါ်) သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီး၊
• မာရ်ငါးပါးဖြစ်သော သကျမာရ်အောင်၊
• စန္ဒမုနိဘုရားနှင့် အခြားဘုရားများ၊
• ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် နှင့် လေးမြို့မြစ်တလျောက်က ချင်းရွာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီအထဲကမှ စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတ ရစေဖို့နာမည်ကြီးဘုရားအချို့ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းကို hightlight လုပ်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကောဇာသက္ကရာဇ်(၈၉၇)၊ ခရစ်သက္ကရာဇ်(၁၅၃၅)ခုနှစ်က ရခိုင်ဘုရင် မင်းဗာကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာပါ။
သရီရဓာတ်တော်ပေါင်း ၈၄၀၀၀၊ ဘုရားရုပ်ပွားတော်ပေါင်း ၈၄၀၀၀ တို့ကို ဌာပနာထည့်သွင်းထားလို့ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးလို့ ခေါ်တွင်တာပါ။ အနောက်ဘင်္ဂါ(၁၂)တိုင်းနှင့် ပေါ်တူဂီရေတပ်ကို အောင်နိုင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ထားခဲ့လို့လည်း ရန်အောင်ဇေယျပုထိုးတော်ကြီး လို့ခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ်။ လိုဏ်ပတ်လမ်း ငါးလမ်းရှိပြီး ပထမလိုဏ်ပတ်လမ်းမှာတော့ အရံစေတီများ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် အတွင်းဆုံးလိုဏ်ပတ်လမ်းတို့မှာတော့ ဆင်းတုတော်များကိုဖူးမျှော်နိုင်ပြီး၊ စတုတ္ထပတ်လမ်းမှာတော့ လက်ရာမြောက်လွန်းတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများ တအံ့တဩမြင်တွေ့ရမှာပါ။
ပုထိုးတော်ကြီးပေါ်ကနေ ထုက္ကံသိမ်ပုထိုးတော်ကြီးကို လှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာလေးကတော့ လှလွန်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကနေဝင်နေပါတယ်။
သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးေရှ့က စျေးဆိုင်တန်းမှာပါ။ ကြေးဆင်းထုတော်နဲ့ ရခိုင်ရိုးရာလာဘ်ကောင် ဗျာလ္လရုပ်လေးတွေ ရောင်းပါတယ်။
မြောက်ဦး မြို့ပြင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးလမ်းကြမ်းတာကြောင့် အများစုကတော့ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တုတ်တုတ်တို့နဲ့ပဲ ဘုရားသွားဖူးကြပါတယ်။ ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ မင်းဗာဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော် ဘုရင်တိက္ခက ကောဇာသက္ကရာဇ်(၉၁၅)ခု၊ အေဒီ ၁၅၅၃ ခုနှစ်က တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာပါ။ တိက္ခဘုရင်နန်းတက်ပြီး မမာမကျန်းဖြစ်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓကုထုံးဖြင့် ကိုးနဝင်းချေအောင် ဓာတ်မွေတော်ပေါင်း ၉၀၀၀၀ ကိုဌာပနာထည့်သွင်းထားလို့ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီး လို့ခေါ်တွင်တာပါ။ ပစ္စံယံ ၅ဆင့်၊ လိုဏ်ပတ်လမ်း ၂ ထပ်လည်းပါရှိပါတယ်။ လိုဏ်ပတ်လမ်းတလျောက် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို ကြည်ညိုစွာဖူးမြင်နိုင်ပြီး ကျောက်ဆစ်လက်ရာ ဒွာရပါလနှင့်ဘီလူးရုပ်ကြွများကို တအံတဩလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှ ဒွာရပါလကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြွ၊ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှ ရုပ်ပွားတော်များ
ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ၊ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှ ရုပ်ပွားတော်များ
ရှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးအရှေ့ မျက်စောင်းထိုးနားလောက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ စကြဝတေးမင်းနဲ့ မင်းဖလောင်း ဘုရင်နှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်အို ကျားကန်ပြည်အို ထုက္ကန် ဟူသောတဘောင်အရ မြို့အကာအကွယ်အဖြစ် တည်ထားခဲ့လို့ ထုက္ကံသိမ်လို့ခေါ်တွင်ကြတာပါ။ ရှေးဘုရင်မင်းမြတ်တွေကသူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေကို ပြုပြင်ရန်ဒီနေရာမှာပဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးပေါ်မှ နာမည်ကြီးview။ မြင်တွေ့ရတာကတော့ ထုက္ကံသိမ်ပုထိုးတော်ကြီးပါ။
သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးနဲ့ကပ်လျက် အနီးနားမှာပဲ တည်ရှိပါတယ်။ ပထမကုသိုလ်ရှင်မှာ ဘုရင်မင်းလှရာဇာစောမွန်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယကုလိုလ်ရှင်မှာ ဘုရင်မင်းဗာကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အံတော်ဓာတ်ကို ဌာပနာထားထားတာကြောင့်လည်း အံတော်သိမ်လို့ ခေါ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
အံ့တော်သိမ်ပုထိုးမြောက်ဘက်နားမှာပဲ တည်ရှိပါတယ်။ ကုသိုလ်ရှင်မှာ ဘုရင်မင်းခမောင်းနှင့် မိဖုရားကြီးရှင်ထွေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးကို ရည်းစူးပြီး ဘုရင်နှင့်မိဖုရားတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှ ရွှေငွေရတနာတွေကိုပုံအောကာ စေတီတည်ထားခဲ့လို့ ရတနာပုံစေတီ လို့ ခေါ်တွင်တာပဲဖြစ်တယ်။
ထုက္ကံသိမ်ပုထိုးတော်ကြီး အနောက်မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ဘုရင်မင်းရှင်စောအား တိုင်းကြီးပြည်ကြီးအပေါင်းတို့က မြောက်ဦးမြို့တည် ဘုရင်ဟူ၍ သိရှိစေရန်အတွက် မုဒ်လေးမုဒ်ဖွင့်တည်ထားခဲ့သောကြောင့် လေးမျက်နှာပုထိုးလို့ ခေါ်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရင်သီရိသုဓမ္မရာဇာ၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ မာရ်အပေါင်းကိုအောင်မြင်စေရန် ရည်မှန်းတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သကျမာရ်အောင်စေတီကတော့ နန်းတော်ကုန်းရဲ့ အရှေ့ဘက်မိုင်ဝက်အကွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဇိနမာရ်အောင်စေတီကတော့ နန်းတော်ကုန်းရဲ့ တောင်ဘက်မိုင်ဝက်အကွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရတနာမာရ်အောင်ကတော့ နန်းတော်ကုန်းအရှေ့မြောက်ဘက် မိုက်ဝက်ကျော်ကျော်မှာတည်ရှိပါတယ်။ လောကမာရ်အောင်စေတီကတော့ နန်းတော်ကုန်းရဲ့ အနောက်မြောက်ယွန်း တစ်မိုင်အကွာမှာရှိပါတယ်။ မင်္ဂလမာရ်အောင်စေတီကတော့ နန်းတော်ကုန်းရဲ့ မြောက်ဘက် တစ်မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။
Sunrise၊ Sunset ကြည့်ရန်
မြောက်ဦးမှာတောင်ကုန်း၊ ကုန်းမြင့်လေးတွေနေရာ တော်တော်များမှာ ရှိပါတယ်။ မြဝါတောင်၊ဟရီတောင်တို့အပေါ်ကနေ ဆည်းဆာအလှကိုခံစား လို့ရနိုင်သလို စေတီပုထိုးတွေကြားထဲကနေ ခံစားချင်ရင်တော့ ရတနာပုံစေတီနားက ကုန်းမြင့်လေးမှာလည်း ကြည့်ရှုခံစားလို့ရပါတယ်။ နံနက်ခင်းဆိုရင် နှင်းမှုံ၊မြူမှုံတွေကြား လေတဟူးဟူးတိုက်နေရင်း ဆည်းဆာအလှကို ခံစားရတဲ့ခံစားမှုမျိုးကတော့ တသက်မမေ့စရာ အမှတ်တရ ဖြစ်စေမှာပါ။
မြောက်ဦးမှာနာမည်ကြီးပြီး လက်ရာအကောင်းဆုံးဆိုင်ကတော့ Moe Cherry စားသောက်ဆိုင်ပါ။စျေးတော့ တော်တော်မြောက်ပါတယ်။နောက်တဆိုင်ကတော့ ကံလှတံတားထိပ်နားက ကောင်းသန့်ထမင်းဆိုင်ပါ။ အရံဟင်းများပြီး သားဟင်းတပွဲနဲ့စားမှ 2500ပဲကျပါတယ်။ကျန်ထမင်းဆိုင်တွေကတော့ မြဝါတောင်အောက်က လှမေထမင်းဆိုင်နဲ့ သူ့အရှေ့နားကရွှေမိုးထမင်းဆိုင်တို့ပါပဲ။ မုန့်လက်ဆောင်းသောက်ချင်ရင်တော့ မြောက်ဦးစျေးထဲပဲညွှန်ပါရစေ။ ရခိုင်မု့န်တီဆိုင်ကတော့ နေရာတော်တော်များများရှိလို့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သွားစားလိုက်ရုံပဲ။ ဆိုင်တစ်စုတဝေး တည်းကတော့ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးရှေ့မှာ အများဆုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ငါးပိ၊ငါးခြောက်တွေကတော့ မြောက်ဦးစျေးထဲမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးရှေ့မှာတော့ ရခိုင်ရိုးရာအထည်၊လုံချည်တွေဝယ်နိုင်သလို ကြေးဆင်းထုတော်နဲ့ ရခိုင်ရိုးရာလာဘ်ကောင် ဗျာလ္လ အရုပ်လေးတွေကိုလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့ဟောင်းဟာ ဘာသာ၊ သာသနာထွန်းကားရာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကြည့်ရှုလေ့လာစရာ ၊ အံ့ဩငေးမောစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ဆောင်းရာသီရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ နှင်းငွေ့လေးတွေအောက်မှာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ လှပနေတဲ့ မြန်မာပြည်အနောက်ဘက်စွန်းက မြောက်ဦးမြို့လေးကို တခါတခေါက်လောက် သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း အတိတ်ရဲ့ လွမ်းမောဖွယ်ရာများကို ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ. .